खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदा नै फाइदा - Health Today Nepal
July 1st, 2019 स्वास्थ्य सुझाब0comments
काठमाडौ,असारः नेपालीहरु खाना मिठो बनाउनको लागि लसुनको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ । सामान्यतःविभिन्न परिकार तेलमा भुट्ने क्रममा अथवा ग्रेभी बनाउन लसुनको प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छौँ । लसुनले कुनै पनि खानाका परिकारहरुलाई स्वादिष्ट बनाउन सहयोग गर्छ ।तर लसुनले खानाका परिकार मिठो मात्र बनाउँदैन् । लसुन यति धेरै गुणकारी तत्व रहेका हुन्छन् कि जसले हामीलाई विभिन्न रोगहरुबाट मुक्त गराउँछ । आयुर्वेदमा त लसुनलाई औषधी नै मानिएको छ । बिहान सबेरै खाली पेटमा लसुन खानाले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा पु¥याउँछ । यी हुन् लसुन खानुका ७ फाईदाः–
१.उच्च रक्तचापबाट छुटकारा
२.मुटु स्वस्थ राख्न
लसुनले मुटुसँग सम्बन्धित रोगहरुलाई दूर गर्छ । लसुन खानाले रगत स्वस्थ रहन्छ र हर्ट अट्याकको खतरा कम भएर जान्छ । लसुन र महको मिश्रण खानाले धमनीमा जम्मा हुने खराब तत्व हराएर जान्छ जसले ब्लड सर्कुलेशनलाई सही तरीकाले मुटुसम्म पु¥याउँछ ।
३. पेटको बिरामीबाट मुक्ति
पेटसँग सम्बन्धित बिरामीहरु जस्तै डायरिया, कब्जियको रोकथामका लागि पनि लसुनको सेवन निकै उपयोगी छ । पानी उमालेर त्यसमा लसुन राखेर खाली पेटमा खाने हो भने यसले डायरिया र कब्जियतबाट मुक्त गराउँछ । लसुनले शरीरमा रहेको हानिकारक तत्वहरुलाई बाहिर निकाल्न पनि मद्धत गर्छ ।
४. तनाबबाट मुक्ति
लसुनले तनाब कम गर्न पनि सहयोग गर्छ । कतिपय अवस्थामा हाम्रो पेटमा एक यस्तो एसिड जम्मा हुन्छ जसले मानिसको मनलाई बेचैन बनाउन सक्छ । तर लसुनले यस्तो एसिड उत्पन्न हुन दिदैँन । लसुन खानाले टाउको दुःख्ने समस्या पनि कम गराउँछ ।
५.पाचन प्रणालीमा सहयोगी
७.दाँतको दुःखाईबाट छुटकारा
Previous article स्वास्थ्यमा व्यापक हेरफेर, स्वास्थ्य सेवा विभागमा डा. प्याकुरेल
Next article सामाजिक सञ्जालको लतले स्वास्थ्यमा पर्ने असर